Inona avy ny Injections SQL? & Ndash; Fahatakarana avy amin'ny Semalt
Inona avy ny Injections SQL? - Fahatakarana avy amin'ny Semalt
SQL Injection dia hack mahazatra, izay ny ankamaroan'ny mpitsikilo dia azo ampiasaina hatramin'izao. Ity fanafihana itydia afaka mampandefitra ny fiarovana sy ny tsiambaratelo amin'ny fampiasana tranokala iray. Mampiasa ny fahabangan'ny vohikalan-tranonkala iray mampiseho ny lavaka fandriam-pahalemana,izay hackers afaka miditra amin'ny tahirin-tranonkala iray - gioco parchi strutture. Avy amin'io hevitra io, dia mitaky ezaka ireo hackers za-draharaha mba hahitana ny fotony syMankanesa any amin'ny serivisy avy amin'ny toerana lavitra amin'ny alalan'ny tambajotra. Amin'ny SQL Injection, afaka manangona vaovao avy amin'ny tranonkala iray ny olona iraytoy ny anaran'ny mpampiasa, tenimiafina ary fampahalalana momba ny karatra.
Ny fiteny fanoratana fototra (SQL), dia tenim-paritra iray izay mamela solosaina iraymba hahazoana, manitsy na manoratra data amin'ny serivera. SQL Injection dia miasa amin'ny karazam-pitaovana manokana momba ny server, izay manolotra ity karazana itymarefo. Ny sasantsasany amin'ny tahiry azo ampiasaina amin'io fanafihana io dia ny MS SQL Server, Oracle, Access, Filemaker Pro ary MySQL. Avy amin'nyNy fomba fijerin'ny mpizaha programa, ny endritsary anaty aterineto na boaty iray ahafahana miditra an-tsoratra ny lahatsoratra dia manome fahafahana handefa baiko amin'ny mpizara. NikChaykovskiy, ny Semalt Senior Manager Success Manager, manazava fa ny hackers dia mampiasa io vulnerability io amin'ny tahiry tahiry toy izany ary miteraka fanafihana maro.
SQL Injection amin'ny asa
Ny ankamaroan'ny tranokala dia manohana endrika sasantsasany izay ahafahan'ny mpampiasa mampiditra ny angona sasany..izanyNy fahafahana dia ny hany fomba ahafahan'ny mpanjifa mandray anjara amin'ny tranonkala iray ary mahazo ny zavatra ilainy sy vahaolana amin'ny fanamarinana. Ny saha, izay afakaMamela ny fangatahana fampidiran-danja toy ireto dia ahitana ny endrika, latabatra, fangatahana fanohanana, bokotra fikarohana, sehatra fanehoan-kevitra, sehatra feedback, famantaranaary koa ny endrika fanoratana. Ny mpamaky iray dia mamaky ny angona avy amin'ireo endrika ireo ho baiko, izay ahafahan'ny mpampiasa manova sy manova ny vaovaoao amin'ny server. Ny teknikam-pahaizana sasany hanakanana ity fanafihana ity dia mety hampiditra ny fampidirana ny fampahalalana momba ny taratasy fidirana alohan'ny hahatongavana amin'ny server.
Ny fanafihan'ny SQL Injection dia mampiasa io vintana io. Misy risika amin'ny server, izayNy ankamaroan'ny hackers dia mampiasa ny karazana didy hafa amin'ity fanafihana ity. Ny mpanao heloka bevava dia mampandefitra ny fiarovana ny serivisy amin'ny fametrahana hafakarazana baiko amin'ny mpizara. Ity fanafihana ity dia afaka mampiseho fampahalalana sarobidy toy ny fampahalalana rehetra atolotra amin'ny endriky ny lahatsoratra.Ankoatra izany, ny piraty dia afaka mampiakatra rakitra, maimaim-poana, manitsy, manolo na manala ireo rakitra atolotra eo amin'ny lohamilin'ireo tahiry ireo. izanydia manan-danja amin'ny fampiasana fehezan-dalàna fiarovana rehefa manamboatra tranokala.
Ho an'ny orinasa e-varotra tsirairay handaminana amim-pahombiazana, dia tokony hisy ny sasanyFiantohana fiarovana amin'ny aterineto. Na izany aza, manao tranokala mikendry ny teknikam-pahefana isika, izay mamela ny varotra na ny fividiananaavy amin'ny mpividy iray. Ny fikasan'ny hackers dia tsy mitsaha-mitandrina velively, ary mahatonga ny dingana manontolo ho mora vidy. SQL Injection dia manokanakarazana hack, izay mampiasa ny vulnerability ny ankamaroan'ny codec web. Ny hacker dia afaka mahazo fidirana amin'ny mpizara ary manatanteraka ny sasany amin'ireo lehibehacks and attacks. Mampidi-doza ny fiarovana ny tranonkala ity karazana aretina ity, ary mety hahomby ny ezaka SEO anao. Ianao dia afakaampiasao ity toro-lalana ity mba hisorohana ny fanafihana SQL Injection amin'ny tranokalanao. Ankoatra izany, azonao atao ny manamora ny mpanjifanao amin'ny loza mety hitrangaIzy ireo no miaro azy amin'ny fanafihana.